အစိမ်းရောင်ခါးပတ်၊ “MOTTAINAI” နဲ့ မြင့်မြတ်သော ခံယူချက် | ဒေါက်တာ မသစ္စာ
April 5, 2011	By ဒေါက်တာ မသစ္စာ	မေမေချစ်သော သားသားနဲ့ မီးမီးရေ…
လောဘမကြီးဘို့ ချိုးခြံ ချွေတာဘို့ နဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကပေးအပ်ထားတဲ့ လက်ဆောင် မွန်တွေ အပေါ်မှာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ဘို့ လူတိုင်း၊တစ်ဦးချင်းစီမှာ တာဝန်ရှိတာကိုလည်း အသေအချာထောက်ပြ ပြောဆိုစည်းရုံး နိုင်ခဲ့ပါ တယ်..။ ဒေါက်တာ ဝန်ဂါရီ က ဒီစကားလုံးလေးကို စတွေ့ ကတည်းကစပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာတွေပေးတဲ့ နိုင်ငံတကာကိုယ်စားပြု အထိန်းအမှတ် အဖြစ် တိုးတက် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ ကျိုတို ပရိုတိုကောကနေ လည်း အခုလူတိုင်းသိကြတဲ့ Reduce, Reuse, Recycle ဆိုတဲ့ တပ်လှန့်သံစကား လုံး ဟာ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရတာပါ..။
Reduce —- လျှော့ချပါ..စွမ်းအင်၊ သဘာဝ အရင်းအမြစ်၊သယံဇာတ သုံးစွဲမှုတွေ လျှော့ချလိုက်ပါတဲ့။
အင်းယားကန်လောက် ပက်လိုက်ပါ..ကန်တော်ကြီးလောက်ပက်လိုက်ပါ..မန္တလေးကျုံးရေ ပက်လိုက်ပါဆိုတာ အင်မတန်မှ အဘိုးတန် တဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ် သယံဇာတတွေကို ဖြုန်းတီး ပစ်လိုက်သလို ဆိုတဲ့အတွေး လေ တွေးပေးပါလို့။
သောက်သုံးရေ တစ်လီတာရဘို့ ကမ္ဘာ မှ လူတွေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေကြလဲ..ခံစားပေးပါ..။
This entry was posted in Environment and tagged Montainai. Bookmark the permalink.
← Scholarship Opportunities	Quotes of Mahatma Gandhi →